Rod Extruder Machine Factory - Mpanamboatra masinina Extruder China, mpamatsy
1. Toetra mampiavaka ny PTFE （UHMWPE） Ram Rod Extruder PFB20 Amin'ny alàlan'ny fanatsarana tsy tapaka, ny fitaovana dia marani-tsaina kokoa, marin-toerana ary mahomby kokoa. Ny fitaovana dia fehezin'ny rafitra PLC, ary mandeha ho azy miaraka amin'ny fandidiana tsotra. Miaraka amin'ny famolavolana samihafa, ny fitaovana dia afaka mamaly ny filan'ny mpampiasa isan-karazany, ary azo atokana ho an'ny mpanjifa. Mihazakazaka maharitra ny fitaovana, miaraka amin'ny tabataba ambany. Ary mampihena ny vidiny amin'ny fitsitsiana herinaratra sy angovo mandritra ny fikojakojana ny tsindry. Fitaovana an ...